July Dream: Dear Yesterday - 10
Posted by JulyDream at 10:24 PM
လူကြုံရှိရင် မေလေး လှမ်းပြောမယ်နော်
မှန်လိုက်တာရှင် ချစ်သူပုံကို ဘယ်ပုံနဲ့မှကို မလဲနိုင်ပါဘူးနော် ..ချက်ချင်း မှန်ဘောင်သွင်းလိုက်တာဘဲလား
တနေကုန် ပင်ပန်းတာ အမောပြေ တယ်ဆိုတာတော့
သွေးလှူဖို့ သွားလိုက်သေး.. လှူခွင့်မရခဲ့ပါ..။
စင်စင် သွေးအားမပြည့်လို့ဖြစ်ရမယ်. ဘယ်ပြည့်မလဲ လေထုတ်တာ များတာကိုး။
8 Jun 09, 23:19
kom: ချစ်တီးကိုတောင် အားနာတယ်။ (တော်တော်ဆိုး။)ုံရိုက်ပေးပါဆိုလို့ ကူညီပေးရသေး (လူရွေးကူညီသေးလား) (မအယ်ကြီး နဲ့ဘယ်လောက်အယ်သလဲဟင်.) (မှန်ဘောင်လေးနဲ ကြည့်ပါရစေ.ပုံတော့ပါပါစေ) (တို့လေတို.. ပြန်မလူာ.လို.အဟင့်
8 Jun 09, 23:14
kom: စဉ်းစားနေသေးတယ် လေးနက်နေတာများပြီလို့ . ရင်ဘတ်ကလေးကော့ပြီးလမ်းလျောက်တဲ့ အခန်းရိုက်ပါဦးလားပြောဦးမလို့အတော်ဘဲ။ ဖတ်လိုက်ဦမးယ်။ ရှက်များနေမလား။
8 Jun 09, 23:13
Yesterday 10 ဆိုတာ ဘာလဲ။စာမကြေဘူး ဆိုတာပေါ်သွားပြီ။
အမိုက်အမဲလေးမို့ ခွေးလွှတ်ကြပါ။ အမြင်မတော်ရင် ကျော်ဖတ်သွားပါနော်။ တကူးတက စိတ် အပင်ပန်း မခံကြပါနဲ့။ အဟီး...
အင် ချစ်သူလေးပုံပဲ အမောပြေကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ၃၆၀ သမ်ငလည်ပြန်တွေမှာတော့ သူမပါဘူးပေါ့လေ တော်တော်သမာဓိကြီးတဲ့ ကိုဂျူလိုင်ကြီးပေါ့ အဟစ်ဟစ်
ဟိုရေချိုးဆင်းမယ့် ကလေးရုပ်ကို တော်တော်စိတ်မကောင်းဖစ်တွားတယ် မဖွယ်မရာလုပ်ခံရရှာတယ်နော် :D
ဧကန္တ သူ့ကောင်မလေး စာလာလာဖတ်ပုံရတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ကြူတာတောင် အားမရဘဲ ဘလော့မှာပါ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ၀င်နေတယ်။ ;D
သူ့ဟာသူနေနေတဲ့ အရုပ်တောင် အေးဆေးမနေရပါလား။ အဟိ... :P
အမ မိုးချိုသင်းထင်သလိုပဲ မဗေဒါလဲ ထင်တယ်... အရင်က ကောင်မလေးအကြောင်း ဒီလောက်မရေးသလိုပဲ... ခုမှ အရမ်းကို ရေးနေပုံထောက်ရင် ကောင်မလေးက ဒီဘလော့ကို ခုနောက်ပိုင်း လာလာဖတ်တယ်ထင်တယ်.. ဟတ်.. ဟတ်...
ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူးဆိုမှ တော်တော်ညံ့တဲ့ဆိုင်ရှင်
ချစ်သူလေးကို ကိုကို ချစ်လွန်းလို့ ဓါတ်ပုံလေး ကူးပြီး ကုတင်ဘေးက စားပွဲလေးမှာကော စာကြည့်စားပွဲမှာကော အလုပ်က စားပွဲမှာကော
ဧည့်ခန်းထဲမှာကော မီးဖိုးထဲမှာကော ထမင်းစားခန်းမှာကော
ဘောင်လှလှ လေးနဲ့ ထည့်ပြီး ထားပါတယ်ကွယ်။
ကိုကို ဖုန်းမှာလည်း ထည့်ထားတယ်။ ကွန်ပြူတာမှာ စကရင်ဆာဗာပေါ့။ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲလည်း ရှိတယ်။ ကိုကိုသွားလေရာ ချစ်ချစ်က ကို ကိုနဲ့ တူတူရှိတယ်။
ဒါဘာလို့ လဲသိလား ချစ်သူလေး
ကိုကို တိတ်ချစ် အညားကြီးချစ် တုန်နေအောင်ကိုချစ် အူလိုက်သည်းလိုက်ချစ် ပါကွယ်လို့ 
ရေးလိုက်လည်း ပြီးတာပါပဲ ကိုဂျူလှိုင်ရယ်
ဆိုလိုရင်းက ဒါပဲ မဟုတ်လား။
မနေ့က တော်တော်ကို အလုပ်များသွားတာပဲနော် ကိုဂျူလိုင်ရေ။ မှန်ဘောင်ထဲက အမောပြေဆေးလေး ရှိပေလို့ တော်ပါသေးရဲ့း) စကားမစပ် အေးဂျင့်ဖိုး ၄၅၀၀ က များလိုက်တာနော်။ သြော်... ရင်းကြရတာပါပဲလေ...
တယ်သဘောကောင်းသူကြီးရေ ကျနော်လာရင်လဲ အဲလိုပဲ လိုက်ပို့ပေးနောကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပြီး ကျနော့်အတွက်ပါခံပေးပေါ့ဗျာ နော.. ဟီး
နင့်ပုံစံနဲ့ဟာ.. အဲ့လို ချစ်သူလေး ဘာညာ အရေးအသားတွေ ဖတ်ရတိုင်း နင့်ပုံစံ မျက်စိထဲမြင်ပြိး ဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်.. ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. အင်း.. အဲ့လိုပေ့ါ